Orinasa mandanjalanja manakana ny manga | China Blue Block Lens mpanamboatra, mpamatsy
Antivirus Blue Block HMC
DIA: 65/72 / 75MM
Sivanina voafantina amin'ny UV manimba ary esory ny jiro ratsy amin'ny fahitalavitra, solosaina, finday, Ipad sns.
Fanamafisana jiro manga mahery vaika.
Fanakanana ny taratra UV manimba.
Mampihena ny famirapiratanao hahita fahitana mahazo aina kokoa.
Fanatsarana ny mifanohitra amin'ny fahitana loko tsara kokoa.
Manakana ny maso tsy ho ketraka sy harerahana.
Ampiasao ho an'ny mpitazana fampisehoana rehetra, indrindra ny mpiasa birao sy ny olona mandany fotoana maharitra amin'ny fampiasana
fitaovana dizitaly izay mitaky fampisehoana sy fampiononana tsara indrindra.
UV420 BLUE CUT LENS
Top index 1.61 manga block asp hmc optika lens
Fiarovana amin'ny tarika taratra UVA (400nm) taratra UV izay miteraka conjunctivitis, katarakta.
Sivana fisafidianana ny UV manimba ary esory ny jiro ratsy amin'ny fahitalavitra, solosaina, finday, Ipad sns sns. Fanakanana ny taratra UV manimba. Mampihena ny famirapiratanao hahita fahitana mahazo aina kokoa. Fanatsarana ny mifanohitra amin'ny fahitana loko tsara kokoa. Manakana ny maso tsy ho ketraka sy harerahana. Ampiasaina ho an'ny mpitazana fampisehoana rehetra, indrindra ireo mpiasa birao sy olona mandany ora maharitra amin'ny fampiasana fitaovana nomerika izay mitaky fampisehoana sy fampiononana tsara indrindra.
1.59 PC BLUE CUT HMC LOTRA OPTIKA
Manolora fiatraikany lehibe kokoa, fanoherana ny vodiny.
Fitaovana vaovao Ultramodern.
1.61 ANTI-GLARE BLUE BLOCK HMC OPTICAL LENS
1.56 sakana manga fisaka bifocal hmc optika ambony
1.61 Blue Block UV420 HMC LENS OPTIKA
Lensa optika 1.67 MR-7 Block Block UV420 HMC
MR-7 Blue Block
DIA: 65/70 / 75MM
Ampiasaina ho an'ny mpitazana fampisehoana rehetra, indrindra ireo mpiasa birao sy olona mandany ora maharitra amin'ny fampiasana fitaovana nomerika izay mitaky fampisehoana sy fampiononana tsara indrindra.
DIA: 65 / 70MM
Hongchen dia mampiasa akora volafotsy Ag + miaraka amin'ny fananana anti-bakteria sy antivirus amin'ny spektrum malalaka
Ahenao ny mety ateraky ny viriosy sy ny bakteria velona ambonin'ny velaran-tsary mety.
Ampiasao tsara ny 99% ny viriosy sy bakteria.
1.74 ASP Blue Block HMC UV420 HMC solomaso optika
ASP Blue Block HMC
DIA: 70 / 75MM
1.56 Blue Block Round Top Bifocal HMC solomaso optika
Blue Block Round Top Bifocal HMC